आजको स्टोरी पढेर नेपाली केटाहरू साह्रै रिसाउन सक्छन् । हुन त म पनि नेपाली केटा नै हुँ, तर अरूजस्तो रिसाउँदिनँ ।
सत्यतथ्यमा आधारित कुरा सुनेर, देखेर, पढेर जो रिसाउँछ, त्यसको मानव चोला सर्वथा निरर्थक हुन पुग्दछ। यसो हुँदा हँसमुख चेहराका साथ अन्तिमसम्म पढ्नुहुनेछ भन्ने ठूलो आशा छ ।
हालसालै मैले विदेशी केटासँग बिहे गरेकी एकजना नेपाली चेलीसँग भेटेको थिएँ ।
ती चेली साह्रै ब्युटीफूल थिइन् । हातको दुईवटै पाखुरामा सर्प र गंगटाको ट्याटु खोपाएकी उनी यसो हेर्दा प्रियंका चोपडाको बैनी नै हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो ।
पशुपतिनाथको कसम, मैले यति सुन्दर नेपाली केटी यसअघि देखेकै थिइनँ । थाइकट कपाल र आकर्षक शारीरिक बनावटमा उनी निकै सुन्दर देखिन्थिन् ।
पूर्वी नेपालबाट कुन दु:खको पहाड उचालेर, कुन कागताली मिलाएर, कुन आँधी हुन्डरीमा उडेर, कुन सपनाको साम्राज्यमा तैरिएर युरोप आइपुगिन् त्यो त थाहा भएन, तर निकै हर्षोल्लास जस्तो, साह्रै गौरवान्वित भएजस्तो, सयौं वर्ष हराएको जोडा भेटिएको जस्तो, हिन्दी चलचित्रको प्रेम गीतमा देखिने अभिनय जस्तो खैरे केटाको हात च्याप्प समातेर हिँड्ने रहिछन् । बाटोमा उभिँदा पनि उतैतिर टाँसिएर उभिने तिनको चालामाला कामुक थियो।
कुनै जमानाकी मेरी प्रेमिकाको घर पाँचथरतिरै रहेछ यिनको घर । ती पूर्व प्रेमिकालाई परार साल साउदीबाट आएको एउटा केटाले 'भर्जिन केटी पाइयो' भन्दै बिहे गर्‍यो भन्ने सुनेको थिएँ ।
यो खैरे केटाको ग्रह दशा के हो, राशिफल के हो त्यो त थाहा हुन सकेन, तर नेपाली केटीलाई विदेशी केटाले हात समाएको देख्दा एकदमै जलन हुने रहेछ ।
बाहिर हाँसेर बोले पनि भित्रभित्रै अत्यन्तै तनाव हुने रहेछ । खानु न पिउनु, चिन्नु न जान्नु, खै किन यस्तो हुन्छ, थाहा भएन । यस्तो किसिमको जलन हरेक नेपाली केटालाई हुन्छ ।
अरबमा बंगाली, इन्डियन, पाकिस्तानी केटाहरूसँग प्रेम गरेर हिँडेको देख्दा, होटलमा गएर बसेको देख्दा नेपाली केटाहरू साह्रै रिसाउँछन्। मानौं कि उनीहरूकै श्रीमती त्यसरी हिँडेका छन् ।
हुन त उनीहरूले वर्षौंसम्म केटीको मुख देख्न पाएका हुँदैनन्। त्यही माथि नेपाली केटी आफ्नै अगाडि विदेशीसँग हिँड्दा तनाव त हुने नै भयो ।
युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा भाँडा हान्ने नेपाली केटाहरू पनि यस्तैयस्तै पीडा बोकेर थोत्रो साइकलमा लखर-लखर डुलिरहेका छन् ।
खैर प्रसंग अगाडिकै जोडौँ । ती पाँचथरकी नानीले मेरै अगाडि खेरै केटाको बडो प्रशंसा गरिन्।
यसले त बजारमा मेरो झोला बोकेर हिँड्छ, मलाई खाना पकाएर खान दिन्छ, हरेक हप्ता घुमाउन लैजान्छ, कस्तो सम्मान गरेर बोल्छ, आफ्नो काम आफैं गर्छ, चर्को बोल्दैन, यस्तै यस्तै ।
खै किन हो उनले गरेको प्रशंसा सुनेर मलाई झनक्क रिस उठ्यो । जिउ सिरिंग भयो। मुखमा आए जति गाली दिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो। तर के गर्ने यो नेपाल हैन, घट्टेकुलो हैन ।
तर पनि हिम्मत गरेर एउटा प्रश्न गरें– अनि तिमीले यत्रो ३ करोड जनसंख्यामा एउटा नेपाली केटा भेटेनौ ? कि विदेशीको… । यस्तो प्रश्न सोध्नुहुँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो, तर सोधिहालें ।
मेरो कुरा बुझिन् क्यारे, उनी खिस्स हाँसिन् । साला, हाँसो पनि तीर छोडे बराबर थियो । तत्कालै जवाफ दिइन्, 'त्यस्तो केही हैन, तर नेपाली केटाहरूको म्यानर नै हुँदैन । खत्तम हुन्छन् । मलाई त नेपाली केटा पटक्कै मन पर्दैन । बाटोमा कतै देखें भने पनि उता फर्केर हिँड्छु । त्यही भएर विदेशी केटासँग बिहे गरेको ।'
उनको जवाफले मेरो मन पिरोल्यो । त्यो म्यानर नहुने, खत्तम हुने नेपाली केटाको लेपन मलाई पनि लाग्ने नै भयो ।
मलाई देखेर पनि कैयौं केटीले मुन्टो बटारेर हिँडेका छन् कि, के थाहा? कसको पेटभित्र को पस्न सक्छ र ? कि यिनको सात ठाउँमा घरबार बिग्रिएपछि यो हदको चटक गरेकी हुन् ?
सामाजिक सञ्जाल फेसबूक तथा टिकटकतिर केटीहरूको फोटो, भिडियो देख्नेबितिक्कै उत्तेजनामा आएर तथानाम कमेन्ट गर्ने म्यानरलेस नेपाली केटाहरू त धेरै नै छन्। लाखौं छन्, त्यस्ता पातकीहरू । तर यस्तो त संसारभरीका केटा नै होलान् । नेपाली केटाहरू मात्रै म्यानरलेस हुन् त ?
नेपाली केटाहरूसँग खाना खाने ढंग पनि हुँदैन अरे । खान पाए भने दुई थाल भात गोठालाले जस्तो खान्छन् अरे । रेस्टुरेन्टमा ख्याकख्याक खोकेर, डकार निकालेर आफ्नो बदनाम आफैँ गर्छन् अरे । अनि खाने कुरा चपाउँदा पनि भैँसीले घाँस चपाएजस्तो दाँत नै देखिने गरी र जिब्रो नै उछिट्टिने गरी चपाउँछन् अरे। चम्चा काँटा खेलाउन पनि नजान्ने, टिस्यु पेपर चलाउन पनि नजान्ने एकदमै पाखण्डी टाइपका हुन्छन् अरे ।
ढिँडो र मासु खान सय किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्न पछाडि नपर्ने नेपाली केटाहरूको बोल्ने तरिका पनि हुँदैन अरे। केटी मान्छेहरूलाई विस्तारै बोलाएको, सुम्सुम्याएको, झोला बोकिदिएको, हात गाँसेर हिँडेको मन पर्छ अरे। तर नेपाली केटाहरू बाटोमा बोल्दा पनि भेडीगोठमा चिच्चाएर भेडा बोलाएजस्तो चर्को बोल्छन् अरे। केटीलाई भारी बोकाएर आफू रित्तै हिँड्छन् अरे । केटीलाई घरको काममा दलाएर आफू सोफामा भुँडी पल्टाएर बस्छन् अरे ।
धेरै नेपाली केटाहरूले घरमा बुढी हुँदाहुँदै मैले त अहिलेसम्म बिहे नै गरेको छैन भनेर ढाँटेको उनलाई मन नपर्ने रहेछ। (त्यस्तो त मैले पनि दुई-चारपटक भनेको छु बाइ)।
अनि नेपाली केटाहरू आफूले चाहेजस्तो नभए भा** भनेर अपमान गर्ने र चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर नानाथरी आरोप लगाउने गर्छन् अरे । चिन्दै नचिनेको एकजना नेपाली केटाले परार साल उनलाई भा** भनेर अनाहकमा गालीगलौज गरेको रहेछ ।
नेपाली केटासँग कुनै सम्बन्ध बनायो भने 'मैले त फलानो केटीलाई ….' भनेर सात गाउँसम्म फुक्दै हिँड्छन् अरे । केटीहरूलाई अपमान गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्न डरै मान्दैनन् अरे ।
पिसाब फेर्न पनि नजान्ने, अंग्रेजी ट्वाइलेटभरी पिसाबको थोपा उछिट्याउने, पाहुना आउन दिन समेत मन नलाग्ने खालका हुन्छन् अरे नेपाली केटा । सरसफाइ भन्ने त जिरो नै हुन्छ अरे ।
नेपाली केटाहरू फोनमा पनि चर्को बोल्ने। बाटोमा हिँडिरहेको छ, तर के काम परेको हो कुन्नी कानमा एयरफोन ठोकेर बोलिरहने, पब्लिक प्लेसमा हिँड्न र अनुशासन पालना गर्न पनि नजान्ने हुन्छन् अरे ।
दाँत नमाझ्ने, लुगा मिलाएर लगाउन नजान्ने जस्तो कि तल हाफ कट्टु लगाएर माथि कोट लगाउने । कफी पसलमा गएर चिया माग्ने, बर्गर पसलमा गएर मासुभात माग्ने खालका हुन्छन् अरे ।
अरूको बारेमा धेरै चासो राख्ने र नकरात्मक कुरा धेरै गर्ने नेपाली केटाको बानी उनलाई मन पर्दैन रहेछ ।
हुन पनि हो, हालसालै कलाकार पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारीको अपुष्ट प्रेमचर्चा मिडियामा के आएको थियो, समीक्षाले प्रयोग गर्ने टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका कमेन्ट हेर्दा ९० प्रतिशत सिधै ह्यारासमेन्ट हुने खालका छन् । तर हामीलाई यो नर्मल लाग्न थालिसकेको छ, यो एक सामाजिक भोगाइ बनिसकेको छ ।
यसको मुख्य कारण हुन सक्छ, नेपाल पुरुषप्रधान हुनुले पनि केटाहरू सभ्य हुन चाहेनन् । हुन त पुरुषप्रधान देश विश्वमा धेरै छन्, तर हामी अझै रुढीवादबाट माथि उठ्न सकेका छैनौं ।
अपशब्द बोल्नु हाम्रा लागि नर्मल भैसक्यो । सभ्य हुने र सभ्यता जोगाउने ठेकेदारी केटीहरूको मात्रै भयो। यस कारण केटाले जे गर्दा पनि हुने, केटीले सामान्य जिन्सको कपडा लगायो भने पनि नानाथरी आरोप लगाउने, रूप, रंग, कपडा र शरीरको बनावटलाई लिएर असभ्य कमेन्ट गर्ने क्रम रोकिएन । यस्तो प्रवृत्ति समाजदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जताततै देख्न सकिन्छ ।
मुखमा खैनी पुकार च्यापेर हिँड्ने नेपाली केटा पनि उनलाई म्यानरविहीन लाग्छ अरे। यस्तो काम खैरेहरूले गर्दैनन् अरे । नेपाली केटाले रक्सी खान पनि जानेका हुँदैन अरे, खायो भने कहिल्यै खान नपाएको जस्तो बाटोमै सुत्नेगरी खान्छन् अरे । बेडमा पनि नेपाली केटाहरूले कुनै 'नलेज' हुँदैन अरे । सधैँ दालभात खाएजस्तो नर्मल, रोमान्टिक हुनै जान्दैनन् अरे ।
ती पाँचथरे ब्यूटीफूलको कुरा सुनेपछि मैले अन्तिम प्रश्न गरें- 'अनि म कस्तो छु नि ? नेपाली केटा नै हुँ, त्यस्तै म्यानरलेस छु ?'
उनले हँसमुख चेहरा बनाएर भनिन्- 'तपाईं त कहाँ त्यस्तो हुनु नि ! नेपाली भन्दैमा सबै केटा कहाँ त्यस्ता हुन्छन् र ? तपाईंजस्तो ​भलादमी केटा पाउनु त केटीहरूको भाग्यको कुरा हो ।'
उनले मोबाइल नम्बर त दिन मानिनन्, फेसबूकमा नाम के रहेछ, पत्ता लगाउँदैछु ।
ऊर्जामन्त्री भुसालको आह्वान- विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाऔं